Waa Kuma Wasiirka Cusub ee Maaliyadda Dowladda Puntland – Radio Daljir
Waa Kuma Wasiirka Cusub ee Maaliyadda Dowladda Puntland
Agoosto 8, 2017 8:17 b 0
Wasiirka Maaliyadda ee Puntland Cabdi Siciid Caarshe (Dhaqaaje) ayaa shalay Madaxweynaha dowladda Puntland u magacaabay wasiirka maaliyada ee Puntland, xili jagada loo dhiibay tahay mid eedeedu badan tahay.
Wasiirka Maaliyaddu wuxuu hadda wajahayaa culeys siyaasadeed oo xoog badan, waxaaana si gaar ah diiradda u saaraya dhaqaale xumo baahsan oo soo food-saartay dhaqaalaha dalka.
Mudane. Abdulahi Carshe waxa uu sanadkii 1968- ku dhashay Qardho, Waxbarshada Hoose/Dhexe waxa uu ku qaatay isla Qardho isaga oo sanadkii 1988 – ka baxay Dugsiga Sare Shiikh Bashiir Secondary School, Burco, Togdheer,Somaliland.
1988-2005- Waxa uu ahaa ganacsade ka shaqeysta gudaha dalka isaga oo illa bur-burkii dowlada ka mid ahaa daljoogta.
2009-2012 – Shahaada heerka 1aad ee Bachelor of Sharia and Law ayuu ka qaatay Jaamacadda Puntland State University ee Garowe.
2005-2014 – Waxa uu ahaa Xildhibaan ka tirsan Gollaha Wakiiladda Dowlada Puntland ee laga soo doortay Gobolka Bari, sidoo kalena waxa uu dhowr jeer ka mid noqday Guddi hoosaadka Baarlamaanka ee arimaha Siyaasada, dhaqaalaha iyo weliba sharciyada.
2014-2015- Waxa uu ahaa La taliyaha Madaxweyne Cabdiwali Gaas ee arimaha Baarlamaanka.
Oct 11, 2015 – Waa uu si rasmi ah uu ula wareegay xilka Gudoomiyiha Gobolka Karkaar ee Puntland isaga oo weli xilka haya.
August 1, 2017- Madaxweynaha Dowladda Puntland Abdiweli M. Ali ayaa Gudoonsiiyey Shahaado waxqabad ka dib markii uu door wanaagsan ka qaatay gurmadkii abaaraha iyo weliba shaqo wanaag.
August 7, 2017- Madaxweynaha Puntland ayaa si rasmi ah ugu magacaabay Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Dowlada Puntland
Puntland iyo Galmudug oo Galkacyo Ciidan Tababar Ugu Soo Xiraya